Abakhiqizi beGelaitn Sheet nabaphakeli - China Gelaitn Sheet Factory
AmaSpredishithi Wokukhanya Okuphezulu weGelatin weDessert futhi inezigaba ezithile, njenge i-gelatin ishidi lekhekhe le-mousse ne-gelatin ishidi lokubhaka.
Ukusuka ku- i-gelatin ishidi libe yimpuphu kungenye indlela yokusetshenziswa.
I-Gelatin icindezelwe ishidi le-gelatine, i-gelatin ayitholakali ngokwemvelo emvelweni, kusuka esikhunjeni sezilwane, emathanjeni, emthanjeni nakwezinye izicubu eziqukethe i-collagen, ngemuva kochungechunge lokwelashwa kwamakhemikhali, ukwehliswa okuncane kwe-hydrolysis okwenziwe ngengxube ye-polypeptide eyindida, enama-amino acid angaphezu kwama-20.
5g ishidi le-gelatin yaziwa nangokuthi i- titanium gelatin ishidi (5g). Imvamisa, amandla wetitanium gelatin ishidi (5g) ukuqhakaza okungu-150. Izinto zokusetshenziswa zeshidi le-gelatin ziyefana ne-gelatin ejwayelekile, kepha isefomini leshidi. Ingasetshenziselwa ukwenza amakhekhe e-mousse, njll.
3.3g Ishidi le-Gelatin
3.3g ishidi le-gelatin yaziwa nangokuthi i- ishidi le-gelatin sheet (3.3g). Imvamisa, amandla weishidi le-gelatin sheet (3.3g) ukuqhakaza okungu-180. Izinto zokusetshenziswa zeshidi le-gelatin ziyefana ne-gelatin ejwayelekile, kepha isefomini leshidi. Ingasetshenziselwa ukwenza amakhekhe e-mousse, njll.
2g i-gelatin ishidi yaziwa nangokuthi i- ishidi le-gelatin (2g). Imvamisa, amandla weishidi le-gelatin (2g) ukuqhuma okungu-220. Izinto zokusetshenziswa zeshidi le-gelatin ziyefana ne-gelatin ejwayelekile, kepha isefomini leshidi. Ingasetshenziselwa ukwenza amakhekhe e-mousse, njll.
I-2.5g ishidi le-gelatin laziwa nangokuthi isiliva le-gelatin ishidi (2.5g). Imvamisa, amandla weisiliva le-gelatin ishidi (2.5g) kuqhakaza okungama-200. Izinto zokusetshenziswa zeshidi le-gelatin ziyefana ne-gelatin ejwayelekile, kepha isefomini leshidi. Ingasetshenziselwa ukwenza amakhekhe e-mousse, njll.